Kitapo ho an'ny alika mafana
Ny alika mafana dia miantso ny antsoina hoe sakafo haingana. Ary na dia heverina ho tsy misy ilàna azy aza ny sakafo toy izany, saingy indraindray dia afaka manala ny tenanao ianao. Indrindra raha mahandro sakafo toy izany any an-trano ianao. Ankehitriny dia holazainay ny fomba fanaovana mofo amin'ny alika mafana ao an-trano .
Kitapo ho an'ny alika mafana - recipe
ronono - 200 ml;
Vita mihinana lafarinina, ampiana siramamy sy sira. Afangaro ny vokatra maina. Ampio haolo, ronono mafana sy menaka misy menaka. Mamay ny koba isika. Arotsaho amin'ny napkin iray ary avelao izy mandritra ny adiny iray ho avy. Rehefa tonga ny koba, dia mametaka azy io, mamelatra azy eo ambony latabatra ary mizara izany ho 9, ary ny tsirairay avy eo dia mikolokolo ao anaty mofomamy kely eo amin'ny 0,5 cm. Ny rindrina tsirairay dia asiana tsangantsanganana roa avy eo andamosina ary mifamatotra. Niparitaka ny kitay teo amina tapa-kazo vita tamin'ny fonosana vita amin'ny baka, miaraka amin'ny tora-pasika ary avelao hijoro mandritra ny antsasak'adiny. Avy eo dia mandefa kitay misy kitay ao anaty lafaoro isika, alohan'ny 180 degre. Ataovy atsy 15 minitra mandra-piverin'ny karaoty volamena. Aorian'izany, ny alika amidy alika mafana dia azo alaina raha vantany vao miala voly, dia azonao atao ny manapaka sy mametraka azy.
Trano ho an'ny alika amboara danois
tsiranoka maina - 1 teaspoon;
sesame fotsy ho an'ny vovoka.
Amin'ny ronono mafana, arotsaho ny leviora ary avelao ho 15 minitra, ary ampio ny dibera mipetaka, siramamy, sira ary hanambatra tsara. Ampitombo tsikelikely ny koban-koditra, hametaveta ny koba manify, izay atody ao anaty vilia iray, mofomamy miaraka amin'ny menaka misy menaka sy ny fonony. Avelao ny koba mandritra ny adiny iray eo ho eo. Aorian'izany dia voamaina ary mizara ho 60-70 g ny tsirairay. Eo amin'ny boaty matevina, manetsika ireo sombintsombiny isika ary manarona amin'ny napkin. Aorian'izay, ny baolina tsirairay dia mihodina ho faribolana iray, izay avy eo mihodina miaraka amin'ny horonan-taratasy iray, izay sisan-kovantsika. Nosoratanay ireo fitaovana miaraka amina sehatra midina eo amin'ny tavoahangy vita amin'ny bozaka, feno menaka miaraka amin'ny menaka voajanahary.
Omena ny antsipiriany mandritra ny antsasak'adiny izahay. Esory ny zezika tsirairay avy miaraka amin'ny voay nokapohina ary hamafy voanio sesame. Mialao amin'ny hafanana 180-200 degre mandritra ny 20 minitra.
Ny fonosana ho an'ny alika Frantsay dia samy hafa amin'ny endriny ho an'ny alika alemana danois. Ary ny tena zava-dehibe dia ny fisian'ny fahasamihafana azy ireo. Amin'ny tranga voalohany, ao anaty penitra iray amin'ny lafiny iray, tapaka ny tampony (boaty), ary ao anatintsika dia manao lavaka miaraka amin'ny antsy, izay mandatsaka ketchup, mayonnaise ary mampiditra saosisy.
Ny dikan-tenim-paharazana faharoa amin'ny boaty dia matetika miomana amin'ny voanio sesame avy any ambony. Avy eo dia aforeto ny tsipìka amin'ny ilany iray ary atodiny ny kitapo ary ampio ny sokatra: ketchup sy voaniho .
Chops from turkey
Mahavariana tokoa ve ny manamboatra ovy ao anaty lafaoro?
Kisendrasendra ao anaty lafaoro
Sakafo klasika ho an'ny shaverm - recipe
Kitapo mofomamy ao anaty lafaoro
Mamihina ny tongotra eo amin'ny rambony ao anaty lafaoro - sakafo mahavelona amin'ny lovia ho an'ny fialantsasatra ary tsy vitan'ny hoe!
Voamadilo voapetaka ao anaty lafaoro
Ahoana no handravahana karazana karbonara ao an-trano?
Sakafo miaraka amin'ny holatra ao anaty lafaoro
Voangory volamena miaraka amin'ireo holatra
Ny masonao eo amin'ny olon-dehibe iray - fa tsy ny fitondran-tena?
Firaisana ara-nofo amin'ny roa
Afaka mahazo bevohoka ve aho fa tsy ny ovulation?
Ireo toetra ofisialy famantarana ny Virgo
Ny fampakaram-bady amin'ny fomba eoropeana
Akanjo lava vita amin'ny satroka
Zana-trondro mitombo ao anaty kitapo
Ahoana ny fomba hamelana ny PMS?
Inona ny sosudosuzhivayuschie mety hitranga mandritra ny fitondrana vohoka?
Sakafo mamy - ny fomba famokarana isankarazany isan'andro
Music for training for girls
Ny tsara indrindra dia ny manala sary